နှစ် သန်း ၁၀၀ သက်တမ်းရှိ အမြီးပါ ပင့်ကူ မြန်မာ့ ပယင်းထဲမှာ တွေ့ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း နှစ် သန်း ၁၀၀ သက်တမ်းရှိ အမြီးပါ ပင့်ကူ မြန်မာ့ ပယင်းထဲမှာ တွေ့
The Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi, found trapped in amber after 100 million year appears inahandout illustration provided on February 5, 2018. University of Kansas/KU News Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. - RC13FF743A40
နှစ် သန်း ၁၀၀ သက်တမ်းရှိ အမြီးပါ ပင့်ကူ မြန်မာ့ ပယင်းထဲမှာ တွေ့
နှစ်ပေါင်း သန်း ၁၀၀ သက်တမ်းရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထက် ပိုရှည်တဲ့ အမြီးပါ ပင့်ကူမျိုးစိတ် တစ်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့ ပယင်းကျောက်ထဲမှာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အရင်တုန်းက မသိရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီ အမြီးပါ ပင့်ကူရှိ ပယင်းကျောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မိုးသစ်တောထဲက ရရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြီး ၃ မီလီမီတာ၊ ခန္ဓာကိုယ် ၂ ဒသမ ၅ မီလီမီတာ ရှိတဲ့ အဲဒီ အမြီးပါ ပင့်ကူကြောင့် ဒိုင်နိုဆောတွေထက် စောပြီး ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ပင့်ကူမျိုးနွယ်နဲ့ ဒီနေ့ခတ် ပင့်ကူတွေရဲက ဆက်စပ်မှုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ အမြီးပါ ပင့်ကူအကြောင်းကို အခု ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ သဘာဝ ဂေဟဗေဒနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဂျာနယ်မှာ သုတေသန စာတမ်းအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှဈ သနျး ၁၀ဝ သကျတမျးရှိ အမွီးပါ ပငျ့ကူ မွနျမာ့ ပယငျးထဲမှာ တှေ့
နှဈပေါငျး သနျး ၁၀ဝ သကျတမျးရှိပွီး ခန်ဓာကိုယျထကျ ပိုရှညျတဲ့ အမွီးပါ ပငျ့ကူမြိုးစိတျ တဈမြိုးကို မွနျမာနိုငျငံက ထှကျတဲ့ ပယငျးကြောကျထဲမှာ ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးအဖွဈ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
အရငျတုနျးက မသိရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီ အမွီးပါ ပငျ့ကူရှိ ပယငျးကြောကျကို မွနျမာနိုငျငံ မွောကျပိုငျး မိုးသဈတောထဲက ရရှိခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အမွီး ၃ မီလီမီတာ၊ ခန်ဓာကိုယျ ၂ ဒသမ ၅ မီလီမီတာ ရှိတဲ့ အဲဒီ အမွီးပါ ပငျ့ကူကွောငျ့ ဒိုငျနိုဆောတှထေကျ စောပွီး ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ပငျ့ကူမြိုးနှယျနဲ့ ဒီနခေ့တျ ပငျ့ကူတှရေဲက ဆကျစပျမှုကို သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ရှာဖှနေိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီ အမွီးပါ ပငျ့ကူအကွောငျးကို အခု ဖဖေျောဝါရီလမှာ ထုတျဝတေဲ့ သဘာဝ ဂဟေဗဒေနှငျ့ ဆငျ့ကဲဖွဈစဉျ ဂြာနယျမှာ သုတသေန စာတမျးအဖွဈ ဖျောပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဘင်္ဂါလီတွေကို ဖိနှိပ်မှု ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပေး
Next articleဘယ်တော့ အိမ်ထောင်ပြုမလဲ ခဏခဏမေးတဲ့ အိမ်နီးချင်း အသတ်ခံရ